Oghere igwe na-eweta ihe ngosi ikike maka oghere Crypto - latabernasanlucar.com
Onye kachasị ama ama n’igwe na-ere ahịa na ahịa ịgba chaa chaa nke United States, International Game Technology (IGT), anatawo ikikere nke ga-enyere ndị ịgba chaa chaa aka iji egwuregwu cryptocurrency na-eweta nke ndị na-eweta ya. Ndị na-agba chaa chaa nwere mkpuchi crypto ga-anabata aha ha ga-anabata ozi ọma a n’ihi na ego dijitalụ na-enwetakwu anya na egwuregwu egwuregwu. Ndị egwuregwu nke oge a, ọkachasị ndị na-eto eto cha cha, na-achọ itinye ego itinye ego na crypto ma rite uru site na ọtụtụ elele dị iche iche dị ka Bitcoin na Ethereum. Dabere na nyocha ọhụụ Bitcoin, uru BTC na-atụ anya iru elu ya na-esote ihe ruru 100,000 dollar n’etiti 2021.
Mma nke ego Wagers na BTC
Oge eruola maka casinos na-ere ahịa iji were usoro ịkwụ ụgwọ ịgba chaa chaa ha na-esote. Dika Office nke US na Trademark nyere IGT patent maka nnata na ime ugwo na ala cha cha na cryptocurrency, dika Bitcoin na Ethereum, ndi egwuregwu agaghi acho iji ATM iji gbanwee ego ha na-etinye n’ime ego tupu ha etinye nzo na oghere ha kacha amasị ha. egwuregwu. Kama nke ahụ, ha nwere ike iji obere akpa ego dijitalụ nke a ga-ejikọ na wallets metụtara na cha cha na akaụntụ. Nke a ga – eme ka ịgba chaa chaa ọ bụghị naanị maka ndị egwuregwu BTC ka ọ masịrị ya mana ọ ga – emekwa ka ọ dị nchebe karịa n’ọnọdụ ọrịa a na – arịa ugbu a.
IGT na-anọgide na Onye Ndu Ahia
IGT bu ikike enwere ike inweta na ulo oru egwuru-egwu. N’ihe kachasị mma, ụlọ ọrụ ahụ nwere òkè 70% nke ahịa igwe oghere na United States. Ka ọ dị ugbu a, dịka ọtụtụ ndị na – eweta ngwa igwe pere mpe batara n’ọgba cha cha, ọnụọgụ a belata ọkara. N’agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ka na-agbasi ike ma bụrụ onye ndu ahịa.
IGT kasị ewu ewu na Megabucks video oghere bụ egwuregwu a na-egwuri ọtụtụ ebe na ọtụtụ ndị Bitcoin casinos na Las Vegas na Nevada. Egwuregwu ahụ na-etu ọnụ na jackpot na-aga n’ihu, mkpụrụ nke ya bụ mgbapụ-na-atụba 10 nde dollar. Ọnụọgụgụ a nwere ike ịbawanye elu karịa – egwuregwu Megabucks gafere Sin City casinos jikọtara, nke pụtara na nzọ 3 dollar ọ bụla emere na oghere ahụ na-atụnye ụtụ na ọdọ mmiri ngụkọta. Iji maa atụ, nnukwu ego Megabucks wepụtara ruru ihe ruru nde dọla iri anọ.
Na nso nso a, IGT nabatakwara ụlọ ọrụ cha cha n’ịntanetị ebe egwuregwu ọhụụ na nke miri emi nwere nnukwu usoro na-eso. Otu n’ime aha kachasị ewu ewu na akara ngosi bụ igwe oghere Cleopatra. Egwuregwu ahụ nwere ọnọdụ nzuzo ma dịkwa na casinos dị na ala. N’ụzọ na-akpali mmasị, ewu ewu ya adịghị adabere na njirimara egwuregwu dị egwu. Isi okwu ya sitere na egwuregwu ochie ochie na-eche na ọ na -emepụta na ohere maka nnukwu ohere mmeri. Egwuregwu ahụ na-akwụ ụgwọ 10,000x nke Wager gị ma dị n’ofe ọtụtụ casinos Bitcoin n’akụkụ free spins na ego ndị ọzọ.
Maka ndị na-achọ igwu egwu egwuregwu Bitcoin kachasị mma na ntanetị gụnyere Bitcoin live casino cha cha, WildTornado cha cha nwere nhọrọ mara mma nke oghere Bitcoin n’efu na egwuregwu tebụl. Nabata ma jide n’aka na egwuregwu WildTornado Bitcoin agaghị akụda mmụọ!